ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဆရာမဂျူးရဲ့စာအုပ်တွေ
ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ ကျမအကြိုက်ဆုံး စာအုပ်
" ချစ်သူလား စကားတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ် "
အမှတ်တရ - ဂျူး
အကြိုက်ဆုံး ဆရာသုမောင်ရဲ့ စာအုပ်တွေ
အမေ လူထု ဒေါ်အမာ
အကြိုက်ဆုံး ဘာသာပြန် စာအုပ်တစ်အုပ် " ဇာစ်မြစ်"
တာ၇ာမင်းဝေ ၊ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် နှင့် အခြားစာအုပ်များး
စာရေးသူ ယွန်း မှ 12:00 PM
ကျန်းမာရွှင်လန်း ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
ကောင်းတယ်။ စာအုပ်စုတာ အားပေးတယ်။
အဲတော့ စာအုပ်တွေအများကြီးပဲ... အရင်တုန်းကတော့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်... အခုနည်းသွားပြီ။ အီးဘုတ်တွေပဲ စုမိတော့တယ်...
ရေလာလောင်းတယ်ဗျို့... နှစ်သစ်မှာ အေးချမ်းပါစေ
လာဌားမီ လာဌားမီး))))) ဌဲဌဲ ပို့ပေးဖို့သာပြင် ဟီးးး
ဖတ်ချင်တယ် .. :D
အခန်းမှာ လူက အိပ်တာက နေရာနည်းနည်း ၊ စာအုပ် စာတမ်းတွေက နေရာများများ ၊ မထူးပါဘူးလေ ဆိုပြီး စာအုပ်တွေကိုပဲ ခေါင်းအုံး အိပ်လိုက်တော့တယ်။ ကဲ . .မှတ်ကရော . . .
ဒါနဲ့. . .ဗွမ်း. . . . ဝုန်း . .
မိရွှေယွန်း... စာအုပ်တွေ မှန်ဗီဒိုထဲ ပြန်ထည့်ထားပါ။ တော်ကြာ ရေတွေ စိုကုန်ဦးမယ်။ ဟော.. ပြောရင်းဆိုရင်း လောင်းပြန်ပြီ။
ကုန်ပါပြီ..ကုန်ပါပြီ..ယွန်းရဲ့ ဘလော့လေးတော့ ရေစိုပြီး ကြွက်စုတ်ဖြစ်ပါပြီ ..ကဲ တို့ လည်း အားကျမခံ လာလည်သမျှလူတွေအကုန်လုံးကို ရေလောင်း၇င်း အိုးမဲပါသုတ်တယ်ဟယ်.... :)) အားလုံးပဲ ပျော်စ၇ာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ..
စာအုပ်တွေ အများကြီးပါလား..... အင်း... ရေမစိုတာ ကံကောင်းတာပေါ့...
ပျော်စရာ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ....
ဂျူးကို ဖတ်တော့ဖတ်တယ် ထွက်သမျှလိုလိုဖတ်တယ်...ဒါပေမယ့် သိပ်ခံတွင်းမလိုက်ဘူး...ဦးသုမောင်ကိုတော့ စေတနာပါတဲ့လေသံအေးအေးလေးနဲ့ရေးတာကို သဘောကျတယ်...အကြိုက်ဆုံးက ဆရာငြိမ်းကျော်ပဲ...ဆရာ့စာအုပ်တွေ ထွက်ခဲ့သမျှကို လေးနှစ်လောက် မွှေနှောက်ပြီးစုထားတာ အခုပြန်လိုချင်လိုက်တာလေ...အရွယ်ရလာပြန်တော့လည်း ဖတ်ချင်တာထက် ဖတ်သင့်တာကို ဦးစားပေးနေရတာနဲ့တင် ဘ၀က ဖွယ်တယ်တယ်ဖြစ်လာတယ်...